Tsy ianao irery no mitolona amin'ny Analytics | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 6, 2014 Alahady Oktobra 5, 2014 Douglas Karr
Nomena anay ny famaritana ny analytics ary koa voatanisa ao amin'ny marketing amin'ny Internet Analytics azonao atao ny manampy anao amin'ny fandrefesana ny fiantraikan'ny paikadin'ny varotrao. Araka ny ahitanao ny sasany amin'ireo antontan'isa etsy ambany, na eo aza izany dia manohy miady aminy ny mpivarotra Analytics safidy sy valiny. Mino aho fa ny fototr'izany dia izany Analytics matetika dia manome fampahalalana iray taonina, nefa tsy manome tolo-kevitra momba ny vahaolana.
As Analytics lasa mandroso hatrany ny rindrambaiko, ny fahatsapana ny angon-drakitra rehetra dia mety ho toa asa be loatra; fa ny orinasa dia mila mahay mandrefy hoe iza, inona, inona ary ny fomba anaovan'izy ireo ny asa mba hanatsarana ny tanjon'ny marketing sy ny fomba hahombiazana. Via Mainstreethost
Ireto ny mahaliana -barotra Analytics antontan'isa nomen'ny infographic:
CMO dia mitatitra fa mandany 8% amin'ny teti-bolan'ny marketing amin'ny analytics momba ny marketing.
Amin'ny taona 2015, marketing Analytics ny fandaniana dia antenaina hitombo 60%.
Tamin'ny taon-dasa, Fanentanana mitarika fitantanana izay nampiditra fantsona nomerika mihoatra ny 4 fantsona tokana na roa mihoatra ny 300%.
40% -n'ny fikambanana marketing be pitsiny no hanana a fomba haingana amin'ny marketing mitambatra.
60% ny mpivarotra no mitady safidy famakafakana ao aminy fitaovana fitantanana ny media sosialy.
Asakasak'ireo orinasa rehetra mitolona amin'ny fakana am-pahombiazana sy famakafakana vaovao avy amin'ny fantsona media sosialy marobe.
Fanondroana tsindrio farany no maodely fandrefesana mahazatra indrindra amin'ny valin'ny media sosialy.
Tags: fanadihadianasafidy famakafakanaAnalyticstetibola fanadihadianastatistikan'ny analyticsAttributiontatitra momba ny fampielezan-kevitrafanarahana ny fanentananatsindrim-peo faranyanalytics momba ny varotrastatistikan'ny analytics momba ny marketing